Fahafatesana telo mirahalahy :: Lehilahy maty tsy nahita akory ireo zanany kambana mianadahy • AoRaha
Fahafatesana telo mirahalahy Lehilahy maty tsy nahita akory ireo zanany kambana mianadahy
Fitadiavana nitera-doza. Dobo an-drano tao amin’ny reniranon’I vodiriana, kaominina voloina distrikan’I maroantsetra, izy telo mirahalahy mpiray tampo, ny alahady 8 septambra 2019, lasa teo. Niampita lakana hamonjy fodiana izy efatra mirahalahy rehefa avy nandray karama no tra-doza. Afaka nanavotr’aina ny mpivoy lakana sy ny zazalahy roa ambin’ny folo taona ary ny mpiara-miasa iray, niara-dia tamin’izy ireo. Roa andro vao hita avokoa ny fatin’izy telo mirahalahy. Ny vadin’izy roa vavy, anabavin’izy telo lahy, niaraka amin’ny dadatoany no nirahin’ny fianakaviana hihaino ny tena zava-nisy marina sy hijery ny toerana nandevenana azy ireo any maroantsetra.
Vao teraka dia kamboty sahady ireto mianadahy kambana kely, zanaky Rakotonirina Jean Louis. Maty navadiky ny lakana tany amin’ny reniranon’i Vodiriana ao amin’ny kaominina Voloina any amin’ny distrikan’i Maroantsetra, tamin’ny alahady 8 septambra lasa teo. Vao tany am-bohoka izy mianadahy ireo no nandao ny tanana hila ravinahitra ity raim-pianakaviana ity.
Mpamaky vato no asa fiveloman-dRakotonirina Jean Louis, roa amby telopolo taona, lahimatoa amin’ny fianakaviany. Niara-narendriky ny lakana niaraka taminy Rakotonirina Jean Michel, dimy amby roapolo taona, sy Nomenjanahary Tokinirina, sivy ambin’ny folo taona, faralahy amin’izy ireo. Samy nindaosin’ny fahafatesana avokoa izy telo mirahalahy ireto.
Mianadahy ny zanaky Rakotonirina Jean Michel, ilay lahiaivo, ary tokana kosa ny an’i Nomenjanahary Tokinirina. Voalaza fa avy nandray ny karamana, izay anton-dia tany an-tany lavitra tany, izy telo mirahalahy. Efa natetika nivezivezy tany Maroantsetra izy ireo saingy tamin’ity diany ity no sendra ny loza ka nafoy hatramin’ny aina. Mitantara ny fahoriana mianjady ny fianakaviana ny vadin’ny lahimatoa.
Vola noentina niteraka
Tamin’ny taona 2017 sy 2018 no efa namaky vato tany Maroantsetra, tao amin’ny orinasa iray avy eto an-drenivohitra, Rakotonirina Jean Louis. Ny volana mey 2018 no tapitra ny asan’izy ireo, tamin’ity andiany voalohany ity. Niverina tany an-toerana indray izy ny volana jona 2018 ka hatramin’ny faran’ny taona 2018, rehefa nahita orinasa avy any Maroantsetra niasana Rakotonirina Jean Louis. Nahavita nivezivezy Maroantsetra sy Antananarivo izy hatramin’ny faran’ny volana jolay 2019. “Nahita làlana sady niova mpampiasa izy ka nanapa-kevitra ny hitondra azy mirahalahy zandriny. Metimety rahateo ny fidiram-bola raha any no miasa”, hoy Ranjaharinandrianina Miora Sandra, vady navelan’ny lahimatoa.
Niova ny toe-bola niditra tao an-tokantrano, nandritra ny famakiam-bato tany Maroantsetra. Ankoatra ny saran-dàlana nivezivezena, nahavita nandefa vola ho an’ny vady aman-janany, Rakotonirina Jean Louis. “Mbola nandefa vola noentiko niteraka azy mianadahy kambana izy, iray volana lasa izay. Ny sarin’izy ireo no mba hitany fa tsy mbola nifanatri-tava izy telo mianadahy”, hoy hatrany Miora, manamafy fa nety tamin’ny fiainan’izy ireo ny nandehan’ny vadiny tany Maroantsetra.
Fikasana handefa vola
Vao tonga tapa-bolana tany Maroantsetra, izy mirahalahy, zandrin-dRakotonirina Jean Louis no niseho ny loza. Nandray ny karama izy efatra mirahalahy, ny alahady 8 septambra 2019, tolakandro. Niantso ny vadiny, Rakotonirina Jean Louis, fa handefa vola ho azy telo mirahavavy vadin’izy telo mirahalahy. “Avy nijery asa hafa izahay akia ry Neny a! Halefako eo ny vola rahampitso maraina. Mety azonareo alohan’ny amin’ny folo maraina izany”, hoy Ranjaharinandrianina Miora Sandra, mitantara ny fifampiresahana farany teo amin’izy mivady, ny alahady tamin’ny efatra ora sy folo minitra. Mbola voatahirin’i Miora tao anatin’ny findainy ny fifampiresahana teo amin’izy ireo.
Miampita ny reniranon’i Vodiriana, amin’ny alalan’ny lakana, rehefa hamonjy ny toeram-ponenany ny mpiasa mpamaky vato rehetra any an-toerana. Somary tratra hariva vao niampita ny renirano izy efatra mirahalahy. “Eo no tsy mazava aminay fianakaviana ny tena antony nahatonga ny loza. Nifamahofaho be ihany koa ny vaovao tonga taty aminay. Mbetika misy milaza fa efa niara-hita ny fatin’izy telo lahy. Mbetika indray hoe tsy mbola nisy hita, ny alahady”, hoy hatrany Miora, manitsy ny andro tena nisehoan’ny loza. Ny alahady 8 septambra 2019 no nitranga ny loza fa tsy araka ny niparitaka tamin’ny haino aman-jery sy ny gazety ary tamin’ny fahitalavitra.
Karama tavela tao am-paosy
Raikitra ny fikarohana nataon’ny fokonolona sy ny zandary raha vao nitranga ny loza. “Niantso ny mpampiasa an’i Jean Louis, tokony tamin’ny folo ora alina, fa maty an-drano izy telo mirahalahy ka tsy mbola hita hatramin’izao”, hoy hatrany ny fitantaran’i Miora.” Nangataka taminy ny mba hilazana fivoatran’ny vaovao aho satria tsy nisy fahana ny findaiko, tamin’io alina io”, hoy Ranjaharinandrianina Miora Sandra, izay mbola hita soritra eny amin’ny tarehiny ny alahelony am-badiny. Tavela tao anaty paosin’i Rakotonirina Jean Louis ireo vola karama sy ny findainy.
Ny ampitso alatsinainy 9 septambra vao hita ny fatin-dRakotonirina Jean Louis. Niaraka hita kosa ny nofo mangatsiak’izy mirahalahy zandriny. “Tsy hitako izay natao fa nigogogogo nitomany fotsiny aho iny alina iny. Ela vao naraina ny andro. Ny alatsinainy tamin’ny efatra maraina aho vao naniraka ny anadahiko hampandre azy roa vavy. Tena mafy ilay izy saingy izay no lahatra tsy maintsy nandalovana. Ny alatsinainy maraina vao niantso izy fa hita ny vadiko”, hoy hatrany Miora, mitantara ny ngidin’ny fiainany nilaozam-bady.
Nalevina tamina fasam-bahiny izy telo mirahalahy raha ny vaovao nampitain’ny zandary any Maroantsetra, tamin’ny fianakaviana. “Tsy mbola tonga eto ampelan-tànanay fianakaviana ny razana fa tsy araka ny vaovao nivoaka an-gazety na tamin’ny fahitalavitra”, hoy Ranjaharinandrianina Miora Sandra, nanitsy ny vaovao niparitaka.
Ny vadin’izy mirahavavy, mpiray tampo amin’izy telo mirahalahy, sy ny dadatoany no lasa any Maroantsetra, nijery ny fasana nandevenana sy hanadihady ny tena zava-nisy marina, ny alarobia 11 septambra lasa teo. Tamin’ny alatsinainy 16 septambra vao tonga tany an-toerana ireo iraka. “Voatery niandry tao Foulpointe, hono, ry zareo noho ny faharatsian’ny toetr’andro ka tsy nisy sambo afaka nandeha. Raha ny sitrapoko dia hoentin’izy ireo miakatra ny fatin’izy telo mirahalahy kanefa mety tsy ho ampy ny vola hoenti-manana. Tsipaipaika avy amin’ny fianakaviana sy ny nisambo-bola tamin’ny malala-tànana no natao saran-dàlana”, hoy hatrany Miora, manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana sy olona tsara sitrapo mba hijery ny ankohonan’ireo vady aman-janaka navelan’izy telo mirahalahy.
Beravina Itaosy :: Nanaitra ny feon’anjomara nanakoako teo an-tanàna